Ubume be-Quakers-Religious Society of Friends
Ubume be-Quakers, okanye uMbutho weNkolo wabahlobo
Inkonzo Yenkolo Yabangane, eyaziwayo kangcono njengeiQuaker , ibandakanya amabandla anesiqhelo kunye nolondolozo. Zonke i-Quakers, ke, ikholelwa ekukhuthazeni uxolo, ekufumaneni izisombululo ezizezinye iingxaki, nokufuna ukukhokelwa kwangaphakathi kukaThixo.
Inani lamaLungu eMhlaba wonke
Ngenxa yokuba i-Quakers ayinayo ibhunga elilawulayo elilodwa, inamba ecacileyo kunzima ukuqinisekiswa, kodwa ukulinganiswa okulinganayo ngamalunga angama-300,000 emhlabeni wonke.
UGeorge Fox (1624-1691) waqala ukunyakaza koMhlobo eNgilani, kunye nabathunywa bevangeli basithwele kuwo wonke umhlaba. Kwiimakoloni zaseMerika, abahlobo batyhutshiswa ngamabandla amisiweyo, kunye namalungu ahlawuliswa, ahlanjululwe, abanjwe entolongweni, aze afakwe. UWilliam Penn (ngo-1644-1718) waquka iinkolelo zamaQuaker kwikarhulumente yomxhaso welizwe lakhe, ekugqibeleni waba ngumbutho wasePennsylvania. Phakathi kweNkqubela kunye neMfazwe yabemi, Abahlobo bafudukela eMidwest nakumaMlambo iMississippi.
Igama elithi "Quaker" laqala njenge-slur, kuba abahlobo bokuqala babongoza abantu ukuba bathuthumele (ukuzamazama) phambi kwamandla eNkosi. Ngo-1877, igama elithi "Quaker Oats" libhaliswe njenge-trademark yokuqala yokutya okutya kwasekuseni, kuba inkampani emva kwayo (engabandakanyeki necawa) ikholelwa ukuba umkhiwane wadibana nemilinganiselo ye-Quaker yokunyaniseka, ubutyebi , ubunyulu kunye namandla. Ngokuchasene nenkolelo eninzi, indoda ebhokisini yi-Quaker yesiGrike, kungekhona uWilliam Penn.
UGeorge Fox, uWilliam Edmondson, uJacob Nayler, uWilliam Penn .
Abaninzi bamaQuaker bahlala kwintshona ye-hemisphere, eYurophu, yangaphambili yamakoloni aseBrithani naseAfrika.
UMbutho Wezenkolo WeQumrhu Elilawulayo Labahlobo:
Amaqela amaninzi amahlobo e-United States afaka: I-Friends General Conference, ichazwe ngokuthi "ayilungiswanga" kwaye inkululeko; Abazalwana beZizwe eziManyeneyo, kubandakanywa iintlanganiso ezingabonakaliyo kunye nabafundisi bebandla, ngamaKristu onke; kunye nabazalwana bamaVangeli bamazwe ngamazwe, ngokuyinhloko umfundisi kunye nomvangeli.
Kule maqela, inkululeko enkulu ivame ukuvunyelwa kwiintlanganiso zendawo.
UWilliam Penn, uDaniel Boone, uBetsy Ross, uThomas Paine, uDolly Madison, uSusan B. Anthony , uJane Addams, u-Annie Oakley, uJames Fennimore Cooper, uWalt Whitman, uJames Michener, uHannah Whitall Smith, uHerbert Hoover, uRichard Nixon, uJulian Bond, uYakobi Dean, uBen Kingsley, uBonnie Raitt, uJoan Baez.
Iinkolelo ZamaQuaker kunye neZenzo
AmaQuaker akholelwa kubungqina bamakholwa, ukuba wonke umntu unokufikelela kuKhanya okuKhe ngaphakathi. Bonke abantu baphathwa ngokulinganayo kwaye bahlonishwa. AmaQuaker ayenqaba ukuthatha izifungo aze azinikele ekuphileni okulula, ukuphepha ukuthintela ngokugqithiseleyo.
Nangona iiQuaker zingenayo inkolo , zihlala zifaka ubungqina bokunyaniseka, ukulingana, ukulula, ubunyulu, noluntu. AmaQuaker afuna uxolo kwaye azama ukuxazulula ingxabano ngeendlela ezingenzi
Iintlanganiso zabahlobo zingenakulungiswa okanye zicwangciswe. Iintlanganiso ezingenakulungiswa zifunwa ngokuzenzekelayo, ukusebenzisana phakathi koluntu kunye nobudlelane noThixo, ngaphandle kweengoma, ityala okanye intshumayelo. Amalungu ngamnye angathetha ukuba aziva ekhokelwa. Iintlanganiso ezihleliweyo, ezenziwa kwiindawo ezininzi zase-US, isiLatini kunye neMzantsi Melika kunye ne-Afrika, zinjengeenkonzo zonqulo zamaProthestani, kunye nemithandazo, umculo kunye nentshumayelo.
Ezi zibizwa ngokuba yintlanganiso ye-pastoral ukususela kwindoda okanye umfazi osebenza njengenkokeli okanye umfundisi.
Ukuze ufunde okungakumbi malunga nee-Quakers ezikholelwayo, tyelela iiKuakers Beliefs and Practices .
(Ingcaciso kule nqaku ihlanganiswe kwaye isishwankathelwe kwimithombo elandelayo: I-Friends United YeeNtlanganiso ezisemthethweni, i-Friends General Conference Website, kunye ne-QuakerInfo.org).
Kutheni i-Luther Vandross Ngenye yezona ziLona ziLona ziNgcono kunazo zonke
I-Sri Chaitanya Mahaprabhu (1486-1534)
I-11 Best Bike Lights, i-Reflectors and Safety Apparel Yokuthenga ngo-2018
Umthetho 34: Iingxabano kunye nezigqibo